DHEGEYSO-Takhaatiir iyo shaqaalihii Hay’ada NILE oo ka guurey Muqdisho. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Takhaatiir iyo shaqaalihii Hay’ada NILE oo ka guurey Muqdisho.
Luulyo 22, 2016 11:02 g 0
Muqdisho, July 23 2016–Iyadoo ay shalay ku egtahay mudadii Dowladda Soomaaliya u qabatay in Shaqaalaha Hey’adda Nile Organization dalka uga baxaan ayaa qaar ka mid ah Shaqaalaha Hey’adda ay bilaabeen inay isaga baxaan magaalada Muqdisho.
WARAYSI-Waa sidee xaaladda degmada Buur-hakaba ee G. Baay.
DHEGEYSO-Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo booqanaya G. Gedo.